Бальзам для губ Holika Holika Dessert Time Lip Balm — купить в Москве | Интернет-магазин Hollyshop
Описание: Ухаживающие бальзамы для губ Holika Holika Dessert Time Lip Balm придают нежный естественный оттенок вашим губам и имеют приятные ароматы. Оригинальная упаковка, привлечет внимание окружающих, когда вы достанете капкейк из сумочки!
Вся палитра оттенков представлена во вкладке "Описание".
06 Lemon Cupcake 383 руб.
450 руб. Нет в наличии	 ПодписатьсяОтписаться
05 Orange Cupcake 383 руб.
04 Plum Pink Cupcake 383 руб.
03 Peach Cupcake 383 руб.
02 Pink Cupcake 383 руб.
01 Red Cupcake	 383 руб.
Ухаживающие бальзамы для губ Holika Holika Dessert Time Lip Balm придают нежный естественный оттенок вашим губам и имеют приятные ароматы. Оригинальная упаковка, привлечет внимание окружающих, когда вы достанете капкейк из сумочки! Каждый бальзам имеет слабо-пигментированную основу, благодаря которой, губы выглядят еще более сочными и соблазнительными. Наносится и распределяется легко, не липнет и не течет, отлично увлажняет.
Помимо витаминного комплекса, в состав бальзамов входит масло Ши, которое славятся своими великолепными питательными способностями и к тому же защищает нежную кожу губ от агрессии внешних воздействий (высоких и низких температур, ветра, высокой и низкой влажности, ультрафиолетового излучения).
Бальзамы-капкейки представлены 6-ю вариациями:
- 01 Red Cupcake - Красный капкейк;
- 02 Pink Cupcake - Розовый капкейк;
- 03 Peach Cupcake - Персиковый капкейк;
- 04 Plum Pink Cupcake - Розово-сливовый капкейк;
- 05 Orange Cupcake - Апельсиновый капкейк.
- 06 Lemon Cupcake - Лимонный капкейк.
Состав: Hydrogenated polyisobutene Polyglyceryl-2 Triisostearate Hydrogenated Polydecene Polybutene Helianthus Annuus Seed Oil Microcrystalline Wax Hydrogenated Styrene/Isoprene Copolymer Ceresin Phenylpropyldimethylsiloxysilicate Diisostearyl Malate Caprylic/Capric/Myristic/Stearic Triglyceride Silica Dimethyl Silylate Tocopheryl Acetate Ozokerite Hydroxystearic Acid POLYGLYCERYL-3 DIISOSTEARATE Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax Fragrance Butyl Methoxydibenzoylmethane CI 45410:1(Red 218) Tocopherol Phenoxyethanol Butyrospermum Parkii (Shea) Butter CI 49410(Red 28 Al Lake) Vitis Vinifera (Grape) Seed Oil Sesamum Indicum (Sesame) Seed Oil Coix Lacryma-Jobi Ma-yuen (Job's Tears) Seed Oil Oryza Sativa (Rice) Germ Oil Carthamus Tinctorius (Safflower) Seed Oil
<p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt; color: #000000;">Ухаживающие бальзамы для губ </span><b><span style="font-size: 12pt; color: #000000;">Holika Holika Dessert Time Lip Balm</span></b><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"> придают нежный естественный оттенок вашим губам и имеют приятные ароматы. Оригинальная упаковка, привлечет внимание окружающих, когда вы достанете капкейк из сумочки! Каждый бальзам имеет слабо-пигментированную основу, благодаря которой, губы выглядят еще более сочными и соблазнительными. Наносится и распределяется легко, не липнет и не течет, отлично увлажняет.</span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> </p> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> </p> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><b><span style="font-size: 13pt;">Основные действующие компоненты:</span></b></span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> </p> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> </p> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;"> Составы бальзамов содержат </span><b><span style="font-size: 12pt;">витамины А, С и Е</span></b><span style="font-size: 12pt;">, которые обладают активными увлажняющими свойствами и способствуют удержанию влаги в коже. </span></span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> </p> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> </p> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000;"><span style="font-size: 12pt;">Помимо витаминного комплекса, в состав бальзамов входит </span><b><span style="font-size: 12pt;">масло Ши</span></b><span style="font-size: 12pt;">, которое славятся своими великолепными питательными способностями и к тому же защищает нежную кожу губ от агрессии внешних воздействий (высоких и низких температур, ветра, высокой и низкой влажности, ультрафиолетового излучения). </span></span><br> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> </p> <p style="text-align: justify;"> <span style="color: #000000;"><b><span style="font-size: 12pt;">Бальзамы-капкейки представлены 6-ю вариациями:</span></b></span> </p> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><br> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> </p> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><img width="217" alt="01-1.jpg" src="/upload/medialibrary/8a8/8a81f07ffd8ca0a87f82dc3259c25e05.jpg" height="222" title="01-1.jpg" align="left"><br> <span style="font-size: 13pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 13pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 13pt;"> </span></span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> </p> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> </p> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><br> <span style="font-size: 13pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 13pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 13pt;"> </span></span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> </p> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> </p> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt; color: #000000;"><br> <span style="font-size: 13pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 13pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 13pt;"> </span></span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> </p> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> </p> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt; color: #000000;">- </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;">01 Red Cupcake - Красный капкейк; </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> </p> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> </p> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><br> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> </p> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> </p> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><br> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> </p> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> </p> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><br> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> </p> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> </p> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><img width="217" alt="02-1.jpg" src="/upload/medialibrary/734/734cb15b2108671e381579abf2494193.jpg" height="222" title="02-1.jpg" align="left"><br> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> </p> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> </p> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><br> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> </p> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> </p> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><br> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> </p> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> </p> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> - 02 Pink Cupcake - Розовый капкейк; </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> </p> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> </p> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><br> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> </p> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> </p> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><br> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> </p> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> </p> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><br> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> </p> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> </p> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><img width="217" alt="03-02.jpg" src="/upload/medialibrary/fc9/fc9223a5a150524d9fa2806158a305ed.jpg" height="222" title="03-02.jpg" align="left"><br> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> </p> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> </p> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><br> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> </p> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> </p> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><br> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> </p> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> </p> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> - 03 Peach Cupcake - Персиковый капкейк; </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> </p> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> </p> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><br> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> </p> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> </p> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><br> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> </p> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> </p> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><br> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> </p> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> </p> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><img width="217" alt="04-1.jpg" src="/upload/medialibrary/6ec/6ecf10637cce9b9e5bfdb5508e64e5ac.jpg" height="222" title="04-1.jpg" align="left"><br> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> </p> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> </p> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><br> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> </p> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> </p> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><br> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> </p> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> </p> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> - 04 Plum Pink Cupcake - Розово-сливовый капкейк; </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> </p> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> </p> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><br> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> </p> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> </p> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><br> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> </p> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> </p> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><br> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> </p> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> </p> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><img width="217" alt="05-1.jpg" src="/upload/medialibrary/35b/35bb4d50d28864f2fd9ed8e6c033e548.jpg" height="222" title="05-1.jpg" align="left"><br> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> </p> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> </p> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><br> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> </p> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> </p> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><br> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> </p> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> </p> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><br> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> </p> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> </p> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> - 05 Orange Cupcake - Апельсиновый капкейк. </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> </p> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> </p> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><br> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> </p> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> </p> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><br> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> </p> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> </p> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><img width="217" alt="06.jpg" src="/upload/medialibrary/717/717b07a429cfcb2e717b62555d941747.jpg" height="222" title="06.jpg" align="left"><br> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> </p> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> </p> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><br> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> </p> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> </p> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><br> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> </p> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> </p> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> </span><span style="color: #000000; font-size: 12pt;"> - 06 Lemon Cupcake - Лимонный капкейк.</span> </p> <p style="text-align: justify;"> </p>